Schonbrunn Beerta xayawaanka ee Vienna, sidoo kale hoy u ahaa 500 noocyada xoolaha, tan 1752. Tusaale ahaan, xadiiqada xayawaanka ee ugu da'da weyn Yurub waxaa ku yaal maroodiga Afrika iyo baandaha weyn. The 42 acres oo ka tirsan beerta xayawaanka ee Viennese waxay ku taalaa qasri dhexdeeda waxayna leedahay soojiidasho yaab leh oo loogu talagalay caruurta iyo waalidiinta.
Tusaale ahaan, guriga keymaha ee beerta xayawaanaadka ku yaal waa muuqaal aad u foolxun oo uu dad sameeyey oo ah kaymo dhab ah oo wata duufaanno. Markaad ku meeraysato si aad isha ugu hayso Aasiyadaha yaryar ee jilicsan iyo xuubabka vampire. Intaa waxaa dheer, Guri dabadheer, shabeel iyo haramcad, guri koala, iyo guryo badan oo badan oo ka mid ah xayawaan cajiiba waa ku sugayaan.
Waxay ku taalaa neefta Tirol gudaha Austria, xadiiqadda Alpine ee ku taal Innsbruck waxay hoy u tahay in ka badan 150 noocyada xoolaha. Waxaad ka heli doontaa xero-xayawaankan cajiibka ah cagteeda buurta Nordkette ee buuraha Alps-ka Austria. Sidaas, haddii aad qorsheyneyso safar qoys oo aad ugu aadeyso Alps, hubi inaad waqti u hesho Alpenzoo Innsbruck.
Xadiiqadda ugu da'da weyn Jarmalka waxaa ku yaal xayawaanno aan caadi ahayn oo adduunka ku nool. Flamingo Chilean iyo African Penguin waa dhowr ka mid ah deggeneyaasha qaaska ah ee aad kula kulmi doontid booqashada qoyskaaga ee beerta xayawaanka ee Berlin. Xayawaanka dhifka ah iyo kuwa qalaad waxay ka dhigayaan Berlin mid ka mid ah xayawaannada ugu fiican ee lagu booqdo carruurtaada Yurub.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan xayawaankani waa inay jiraan qiimaha tikidhada qaaska ah qoysaska yar ama weyn, hal mar laga soo galo beerta xayawaanka, ama combo leh albaabka quraaradda.
Hamburg waa wax weyn magaalo-nasasho, iyo magaalo madadaalo leh oo lagu booqdo carruurta. Hagenbeck Tierpark ee Hamburg waa hal tusaale oo ah wax xiiso leh oo lagu sameeyo Hamburg carruurta. Waa mid ka mid ah xadiiqooyinka ugu quruxda badan Yurub iyo Jarmalka. Guri furan oo ka badan 1,800 xayawaanka, beertan xayawaanka ah ee cajiibka ahi waxay leedahay Badweynta Arctic. Badweynta Arctic waa halka aad ka bilaabi kartid xiisaha qoyska, oo booqo bears, penguins, iyo orso badda.
Xayawaanka ugu fiican Belgium ayaa aad u ballaariyay sannadihii la soo dhaafay. Beerta xayawaanku aad bey u koray oo waa maya bartamaha magaalada, aad ugu dhow xarunta dhexe. Waxaa intaa dheer, zoo's Skywalk ayaa daaha ka qaadi doona inta ugu badan muuqaal dusha sare leh ee jardiinooyinka iyo mid ka mid ah magaalooyinka ka baxsan-laga-garaacay ee Yurub.
Libaaxyada badda duurjoogta ah iyo bisadaha duurjoogta ah, Flamingos Carreabean, iyo qoolley waaweyn, waa wax yar oo ka mid ah xayawaanka gaarka ah ee aad la kulmi doonto. Beertan xayawaanka ah ee cajiibka ahi waxay ku taal gobolka cusub ee loo yaqaan 'Aquitaine' ee dalka Faransiiska, xeebta Atlantic, tacabur weyn ka Paris tareen.
Wax kale oo la yaab leh oo dhigaya xayawaanka Basel 10 xayawaanka ugu fiican Yurub, waa xanaanada carruurta. Halkan carruurtaadu waxay ka heli doonaan fursad qaali ah oo ay kula kulmaan xayawaannada guryaha laga keeno ee adduunka ka socda, iyaga rabaayad, oo quudin.
Booqashada Beerta Xayawaanku waa firfircoonaan bannaanka u ah qoyska oo idil. Jardiinooyinka cagaaran iyo keymaha, xayawaanka iyo dhirta aan caadiga ahayn, xiiso gelin doona oo madadaalin doona carruurta. The 10 xayawaanka ugu fiican Yurub si ay ula soo booqdaan carruurtaada, waa guntimaha qarsoon ee yurub waxayna mudan yihiin ugu yaraan maalin-safar dhan.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 Xayawaanka ugu Fiican Si Aad Ula Soo Booqato Caruurtaada Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-zoos-visit-kids-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
biimayn BestzoosEurope Safarka Yurub Yurupwithkids qoyska kids tareen safarka Travelingwithkids xayawaanka